Gịnị mere ndị mmadụ mkpa ka uzo iCloud ebighị on iPhone / iPad?
Mkpa maka gafere iCloud ebighị bụ na-emekarị na ntakiri ka otu onye bụ mgbe niile maara ya ma ọ bụ ya iCloud nkọwa akaụntụ. Ma na ihe omume nke ngwaọrụ gị na-ikpîkpu ma ọ bụ mmadụ na mberede na-iwere site na onye (na-emekarị zuru), gafere ọtụtụ iCloud ebighị bụ nanị viable ngwọta na otu na ezi ebumnobi nwere ike imeli iji chọta mkpa nkọwa banyere ngwaọrụ nwe.
iCloud akaụntụ, ọ bụ ezie na ọ dịghị mfe hacked, ike ka a hacked site ọkà hackers ma ọ bụ nanị ndị na ndị maara na akaụntụ gị nkọwa. Ọ bụrụ na otu na-agba mbọ iji nweta n'ime ha hacked (ma ọ bụ) tampered akaụntụ site na mgbe mgbalị, ndị iDevice nwere ike N'eziokwu tọgharịa ya onwe na-eme a ngụkọta ọnwụ nke data nke bụ ihe ọ dịghị onye nwe ya chọrọ ime.
Gafere iCloud ebighị na iji DNS usoro.
Ebe ị jide iPhone nke zuru ezu na-amaghị kwadoro na-ịchọrọ ịlaghachi otu ya kwesịrị nwe na-achọ ndị kwesịrị ekwesị nkọwa banyere onye nwe, nke a nwere ike enweta na a mkpirikpi oge site n'itinye ndị na-esonụ usoro.
Na ebighị window, pịa n'ụlọ button wee họrọ Wi-Fi ntọala na mgbe ahụ enweta na 'm' bonded site a gburugburu. Ugbu a ọ bụ oge iji wepu ẹdude DNS nkesa na-etinye a omenala otu onye n'ime ngagharị.
Nzọụkwụ 1: Ị chọrọ ịbanye ọhụrụ DNS nkesa dị ka 78.109.17.60.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ azụ.
Nzọụkwụ 3: Kpatụ mere.
Nzọụkwụ 4: Enweta na ebighị enyemaka.
Ozugbo ị mezuo n'elu kwuru banyere mfe nzọụkwụ, a ozi ga-apụta-asị na ị ọma jikọọ m nkesa ".
Enweta na menu n'elu nri na pịgharịa site na a ọnụ ọgụgụ nke ngwa maka ojiji dị ka YouTube, Mail, Maps, Games, Social, User chat, Video, Audio na ndị ọzọ. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị ngwa nke ị na-eche nwere ike inye na ozi ị na-achọ maka nwe nke ekwentị.
Gafere iCloud ebighị na enyemaka nke a kwesịrị ekwesị ngwá ọrụ.
E nwere ọnụ ọgụgụ dị nta nke ọtọ ngwaọrụ dị na ike abịa kemfe na gafere ọtụtụ iCloud ebighị n'ihi na gị iPhone ma ọ bụ iPad. Onye na aha bụ 'iCloud ebighị uzo ngwá ọrụ version 1.4'. The ngwaọrụ aha na-asọpụrụ Nyiwe ihe ọ na-ekwu na ọ bụ a n'ezie mfe ngwá ọrụ iji.
N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ n'ihi na otu onye na-eso na-eji ngwá ọrụ a n'ụzọ dị irè.
Nzọụkwụ 1: Download na wụnye ngwa na gị na desktọọpụ.
Nzọụkwụ 2: Ẹkedori ngwa na jikọọ na gị iPhone ma ọ bụ iPad site na eriri USB gị na desktọọpụ.
Nzọụkwụ 3: The ngwá ọrụ ga ugbu a ike iṅomi ngwaọrụ gị na-agụ, sị ya IMEI nọmba.
Nzọụkwụ 4: Pịa na 'uzo ebighị mkpọchi' button na ndidi na-echere usoro ga-agwụ agwụ. The ngwá ọrụ na enyemaka nke ngwaọrụ gị IMEI koodu ga jikọọ na Apple sava si ebe ọ ga chupu na hichapụ ihe niile jikọrọ iCloud ndekọ nke ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 5: Ozugbo usoro zuru ezu, Ikwupu ekwentị gị na reboot ya. Ị ga-achọpụta na iCloud mkpọchi e na-adịgide adịgide wepụrụ na ya mere ọ dịghị ụdị tupu ebighị a chọrọ iji ngwaọrụ.
Olee otú ihichapu data remotely si gị furu efu iPhone.
Rịba ama: Tupu etinyewe, onye kwesịrị mara na otu ugboro niile data-ehichapu si gị iPhone, unu agakwaghị enwe ike iji 'Chọta m iPhone' na ndị niile gị data ga-ehichapu kpamkpam.
Nzọụkwụ 1: Launch Chọta m iPhone na ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ na-abanye na akaụntụ gị nzere. Ị nwere ike iji ihe ọ bụla iOS ngwaọrụ maka a na usoro.
Nzọụkwụ 2: Ozugbo ị nbanye, ị ga-enwe ele ndị niile na ngwaọrụ na-jikọrọ ya na akaụntụ gị. Họrọ ngwaọrụ ịchọrọ ị ihichapu.
Biko mara na ngwaọrụ gị ga-viewable naanị ma ọ bụrụ na Chọta m iPhone mma bụ na gị na furu efu ngwaọrụ na-arụ ọrụ.
Nzọụkwụ 3: Enweta na omume bọtịnụ na ala na enweta na ihichapu.
Nzọụkwụ 4: Ị ga-jụrụ n'ihi na nkwenye ihichapu gị furu efu iPhone na ahụ ga-achọ ka ị na jupụta na akaụntụ gị nzere n'ihi na otu onye na oge ikpeazụ.
Nzọụkwụ 5: Ugbu a, ị ga-achọ dejupụta a kọntaktị ọnụ ọgụgụ nke ga-egosi na gị furu efu iPhone tinyere a kwesịrị ekwesị ozi. Otú a na-emesapụ aka mmadụ pụrụ esi na kọntaktị na ị na-enyere gị weghachite gị iPhone.
Nzọụkwụ 6: Ozugbo chọrọ ọmụma na-enwetara, na erasing nke data ga-amalite na ị ga-amara gị ọkwa mgbe ọ completes.
Ọ bụ ezigbo mfe ka ị na-iCloud akaụntụ mma ma ọ bụrụ na ị maara na ndị dị mfe aghụghọ. Ma ị na-eji iCloud na gị iPhone ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ Apple ngwaọrụ,-eso ndị a ga-hụ na gị na ọmụma a nọ ná nchebe. Na ọ bụ n'ezie mfe uzo iCloud ebighị!
> Resource> iCloud> iCloud Kpọchiri Akpọchi: Olee otú uzo iCloud ebighị on iPhone